त्यसैले शिवलिं’गको अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, ब्यवहार वा प्रतीक हो । धर्ती यसको पिठ्यु र आधार हो । त्यसैले अनन्त शुन्यबाट पैदा हुन्छ, त्यसैमा लय हुनाका कारण यसलाई लिं’ग तथा अन्य विभिन्न नामबाट समेत सम्बोधन गरिएको हो ।जस्तोः प्रकाश स्तम्भ/लिं’ग, अग्नी स्तम्भ/लिं’ग, उर्जा स्तम्भ/लिं’ग आदि । ब्रह्माण्डमा दुई चीज छन् उर्जा र पदार्थ । हाम्रो शरीर पदार्थबाट निर्मित हुन्छ भने आत्मा उर्जा हो ।यसै प्रकारले शिव पदार्थ र शक्ति उर्जाको प्रतीक बनेर शिवलिं’गका रुपमा चिनिन्छ ।ब्रह्माण्डमा उपस्थित सबै ठोस तथा उर्जा शिवलिं’गमा निहित हुन्छ । वास्तवममा शिवलिं’ग हाम्रो ब्रह्माण्डको आकृति हो । किन शिब लिंग काे पूजा गरीन्छ ? शिव शंभु आदि र अंत का देवता हुन वहाकाे न कुनै स्वरूप हुन्छ न आकार वहा निराकार हुनुहुन्छ ।पानीभित्रबाट सहतमा निस्केसरी छालामा बिस्तारै तीनवटा फरक-फरक रंगका सुईहरु प्रस्ट देखिन थाले। रातो रंगको धर्सो १२ अंकतिरको थोप्लो तिर सोझियो। निलो र हरियो रंगको सुई ६ बजेको थोप्लो तिर तेस्रियो। सुईहरु देखिएको ठाउँ छाम्दा पनि महसुस हुन्थ्यो।बाथरुमबाट निस्किए। सोच्दै नसोचेको क भयो, कसलाई भन्ने मन डरायो। ‘के भएको देखाउन हस्पिटल जाउँ कि? फेरी दुखेको पोलेको केही छैन। के होला पहिले पत्ता लगाउनु पर्ने सोचे। सोच्दा सोच्दै कोठा बाहिर निस्के। नजिकै रहेको सानिमाको घर तिर तेर्सिए। सानिमाको छोरा मैरै उमेरको थियो। उसैले भन्ने आँटेर कल गरे। ‘आयुष कता छस्?’ ‘घरमा’ ‘म आउँदै छु है’ ‘ओके’, उसले फोन राख्यो।
← TikTok बनाउदा झुलुङ्गे पुलबाट तल खसेको लाइभ भिडियो ,Dang Purandhara Jharana
दाङमा टिक–टक बनाउने क्रममा झोलुङ्गे पुलबाट लडेर एक जना गम्भीर घाइते लाइभ भिडियो →